Amụma Nzuzo - NYE Countdown.com
Dị ka ọtụtụ ndị na-ahụ maka weebụsaịtị, NYECountdown, llc, (“NYECOUNTDOWN, LLC”), na-anakọta ozi na-enweghị njirimara nke ụdị ihe nchọgharị weebụ na sava na-enyekarị, dị ka ụdị ihe nchọgharị, mmasị asụsụ, saịtị na-ezo aka, na ụbọchị na oge nke onye ọbịa ọ bụla rịọrọ. NYECOUNTDOWN, ebumnuche LLC maka ịnakọta ozi na-enweghị njirimara bụ iji ghọta nke ọma otú NYECOUNTDOWN, ndị ọbịa LLC si eji weebụsaịtị ha. Site n'oge ruo n'oge, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike wepụta ozi na-anaghị akọwapụta onwe ya na mkpokọta, dịka, site na ibipụta akụkọ banyere omume na ojiji nke weebụsaịtị ya. NYECOUNTDOWN, LLC na-anakọkwa ozi nwere ike ịchọpụta onwe ya dị ka adreesị Protocol Internet (IP) maka ndị ọrụ wee banye yana maka ndị ọrụ na-ahapụ nkọwa na blọọgụ WordPress.com. NYECOUNTDOWN, LLC na-ekpughere adreesị onye ọrụ na onye na-aza ajụjụ IP n'okpuru otu ọnọdụ ọ na-eji ma na-ekpughere ozi na-achọpụta onwe ya dị ka akọwara n'okpuru, belụsọ na adreesị IP na adreesị email ahụ ma gosipụta ya na ndị nchịkwa nke blog ebe ekwughi okwu.
Visitorsfọdụ ndị bịara na NYECOUNTDOWN, webụsaịtị LLC na-ahọrọ iso ndị emekari NYECOUNTDOWN, LLC ụzọ chọrọ NYECOUNTDOWN, LLC iji kpokọta ozi na-achọpụta maka onwe ya. Ole na ụdị ozi NYECOUNTDOWN, LLC na-achịkọta na-adabere n'ụdị mmekọrịta ahụ. Ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike itinye aka na NYECOUNTDOWN, a na-arịọ LLC ka ha nyekwuo ozi ndị ọzọ, gụnyere ozi dị mkpa gbasara onwe ya na ego achọrọ iji hazie azụmahịa ndị ahụ. N'okwu nke ọ bụla, NYECOUNTDOWN, LLC na-anakọta ozi dị otú ahụ naanị dịka ọ dị mkpa ma ọ bụ nke kwesịrị ekwesị iji mezuo ebumnuche nke mmekọ ahụ na NYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC anaghị ekpughe ozi na-egosipụta njirimara na-abụghị nke akọwapụtara n'okpuru. Ndị ọbịa nwere ike jụ ịnye ozi gbasara njirimara, yana cha cha na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ụfọdụ ihe metụtara weebụsaịtị. Nyere mba uwa nile webụsaịtị ndị ọrụ, ozi gbasara gị nwere ike ịpụta n'ihu ndị na-abụghị obodo obibi gị, gụnyere ndị nọ na mba nke iwu nzuzo na ụkpụrụ nke iwu nke obodo gị ezughi oke iji hụ na echekwabara ọkwa maka ozi dị. Ọ bụrụ n ’ejighi n’aka ma Iwu Nzuzo a na-emegide iwu mpaghara etinyere, ị gaghị enyefe ozi gị. Ọ bụrụ na ịnọ na European Union, ị ga-amarakwa na aga-ebufe ozi gị na United States, nke European Union chere na enweghị nchekwa data ezughi oke. Agbanyeghị, dị na iwu obodo na-etinye ntinye European Union Direction 95 / 46 / EC nke 24 October 1995 ("EU Ntuziaka Nzuzo") na nchedo nke ndị mmadụ n'otu n'otu gbasara nhazi nke data onwe yana na ngagharị free nke data dị otú ahụ. dị na mba ndị dị na mpụga United States America na-enyefe ozi nkeonwe na-esite na nkwenye na ozi ndị dị ka enyere na ozi nzuzo dị ka enyere ya na nnyefe ya na / ma ọ bụ nchekwa na United States America.
A na-agba ndị debanyere aha ume, mana achọrọghị, ịbanye ozi gbasara onwe ha, enwere ike igosi ya na akaụntụ ha. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-egosipụta naanị n’ime netwọọdụ Onye na-edeba aha gị, “Aha Nickname” gị na obodo ị nọ na ya. Ọ bụrụ na ịchọghị ka ekpughere ozi ọnọdụ gị, abanyela na ya mgbe ịmechara mpempe ozi ndebanye aha gị.
NYECOUNTDOWN, LLC na-agbasi mbọ ike ichebe nzuzo ụmụaka, ọkachasị ndị nọ n'okpuru 13. Dị ka NYECOUNTDOWN dị otú ahụ, LLC na-agba ndị nne na nna na ndị nlekọta ume ka ha sonyeere nwa ha ma ọ bụ nyocha ụmụaka na ntanetị na ntanetị. NYECOUNTDOWN, LLC anaghị akpachara anya na-anakọta ozi n'aka ụmụ aka. Ọzọkwa, NYECOUNTDOWN, LLC anaghị ezubere saịtị ya aka n’ebe ụmụaka nọ.
Njikọ na saịtị weebụ Na-abụghị Ọrụ
Saịtị ahụ nwere ike ịgụnye njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ ma ọ bụ ọnọdụ ụfọdụ nke NYECOUNTDOWN, LLC ma ọ bụ ndị mmekọ ya na-arụ, ejiri ndị ọzọ rụọ ọrụ. Njikọ ndị a bụ naanị maka ịdị mma maka gị. Anyị eleleela ozi ahụ na saịtị ndị ọzọ. Anyị anaghị akpata ọdịnaya maka saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enwere ike ị nweta site na saịtị ndị ọzọ. Ya mere, ịkwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-eji weebụsaịtị ndị ọzọ, ebe ị na-eme ya mgbe ị nwere nsogbu. NYECOUNTDOWN, LLC na-agba gị ume ka ị nyochaa iwu nzuzo nke saịtị weebụ ọ bụla tupu ịnyefe ozi nkeonwe.
Ozi Ebe E Si Nweta
NYECOUNTDOWN, LLC na-eji PayPal, Inc. dịka onye na-eweta ọrụ akwụmụgwọ ndị ọzọ. NYECOUNTDOWN, LLC anaghị echekwa n'oge ọ bụla, ozi otuto ọ bụla iji zụta ma ọ bụ jigide ndenye aha ya. Dịka, NYECOUNTDOWN, LLC na-ewepụ ọrụ niile maka ozi kredit.
NYECOUNTDOWN, LLC na-eji nchịkọta Google eme ihe iji nweta ozi nzuzo site na njirimara ya ma nwee ike ịnakọta ọnụ ọgụgụ gbasara omume ndị ọbịa na weebụsaịtị ya. NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike igosipụta ozi a n'ihu ọha ma ọ bụ nye ya ndị ọzọ. Agbanyeghị, NYECOUNTDOWN, LLC anaghị ekpughere ozi na-achọpụta onwe ya karịa nke akọwapụtara n'okpuru.
NYECOUNTDOWN, LLC na-ekpughere ozi nwere ike ịchọpụta ma jiri aka ya mata naanị nke ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ya na ndị otu nwere:
• ịchọrọ ịmara ozi ahụ iji hazie ya na NYECOUNTDOWN, n'aha LLC ma ọ bụ iji nye ọrụ dị na NYECOUNTDOWN, weebụsaịtị LLC, yana
• ndị kwetara ịhapụ igosipụta ya ndị ọzọ.
Offọdụ n'ime ndị ọrụ ahụ, ndị ọrụ ya na ụlọ ọrụ nwere ike ịnọ n'èzí obodo gị; site na iji NYECOUNTDOWN, webụsaịtị LLC, ị kwenyere na inyefe ụdịrị ozi a na ha. NYECOUNTDOWN, LLC agaghị agbazite ma ọ bụ rewa ihe nwere ike ime ka mmadụ mata onye ọ bụla. Ndị ọzọ karịa na ndị ọrụ ya, ndị ọrụ ya na ndị otu ejikọtara ya, dị ka akọwara n’elu, NYECOUNTDOWN, LLC na-ekpughe ihe nwere ike imewapụta na ịchọpụta ozi nke onwe naanị na nzaghachi subpoena, iwu ụlọ ikpe ma ọ bụ arịrịọ gọọmentị ndị ọzọ, ma ọ bụ mgbe NYECOUNTDOWN, LLC kwenyere na ọ dị mma. okwukwe na ngosipụta dị mkpa iji chekwaa ihe ma ọ bụ ikike nke NYECOUNTDOWN, LLC, ndị ọzọ ma ọ bụ ọha n'ozuzu. Y’oburu onye ahia nke edebanyere aha NYECOUNTDOWN, weputa LLC ma webata adresị email gi, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike iziga gi ozi oge ufodu igwa ihe banyere mmeghari ohuru, juo nzaghachi gi, ma obu n’eme ka gi mara ihe na - eme. ya na NYECOUNTDOWN, LLC na ngwa ahia anyi. Anyị na-eji blọọgụ ngwaahịa anyị dị iche iche iji kparịta ụdị ozi a, yabụ anyị na-atụ anya idobe ụdị ozi email a opekempe. Ọ bụrụ na i zitere anyị arịrịọ (dịka ọmụmaatụ site na ozi nkwado ma ọ bụ site na otu usoro nzaghachi), anyị na-edobe ikike iji bipụta ya iji nyere anyị aka ịkọwa ma ọ bụ zaa arịrịọ gị ma ọ bụ iji nyere anyị aka ịkwado ndị ọrụ ndị ọzọ. NYECOUNTDOWN, LLC na-ewere usoro niile kwesiri ekwesi iji chebe nnabata, ojiji, mgbanwe ma ọ bụ mbibi nke ị nwere ike ịchọpụta na ịchọpụta ozi nkeonwe.
Kuki na Esochina arịrịọ
A kuki bụ udiri ozi nke websaịtị na-echekwa na kọmputa ndị ọbịa, na ihe nchọgharị ndị ọbịa na-enye ihe nrụọrụ weebụ oge ọ bụla ọbịa bịara. NYECOUNTDOWN, LLC na-eji kuki iji nyere NYECOUNTDOWN, LLC mata ma soro ndị ọbịa, ojiji ha nke NYECOUNTDOWN, LLC webụsaịtị, na ntanetị ohere ịnweta weebụsaịtị ha. NYECOUNTDOWN, ndị ọbịa LLC na-achọghị ka etinye kuki na kọmputa ha kwesịrị ịtọ ndị nyocha ha ka ha jụ kuki tupu ha ejiri NYECOUNTDOWN, weebụsaịtị nke LLC, na ndọtị nke ụfọdụ njirimara NYECOUNTDOWN, weebụsaịtị LLC nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma na-enweghị enyemaka nke kuki. NYECOUNTDOWN, LLC ga / agaghị asọpụrụ anaghị enye traktị.
Ọ bụrụ na NYECOUNTDOWN, LLC, ma ọ bụ ihe niile ejiri akụ ya, enwetara, ma ọ bụ n'ihe omume a na-atụghị anya ya na NYECOUNTDOWN, LLC na-apụ na azụmaahịa ma ọ bụ na-abanye odida, ozi onye ọrụ ga-abụ otu n'ime akụ nke ndị ọzọ na-ebugharị ma ọ bụ nweta. You kwenyere na ntụgharị dị otú ahụ nwere ike ime, yana onye ọbụla nwetara NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike ịga n'ihu na-eji ozi nkeonwe gị dị ka akọwara na iwu a.
Ndị mgbasa ozi mgbasa ozi, ndị nwere ike ịtọ kuki, nwere ike ibunye mgbasa ozi na-egosi na saịtị weebụ anyị ọ bụla. Kuki ndị a na-eme ka sava mgbasa ozi mara kọmputa gị oge ọ bụla ha zitere gị mgbasa ozi n'ịntanetị iji kpokọta ozi gbasara gị ma ọ bụ ndị ọzọ na-eji kọmputa gị. Ihe omuma a na - enye ohere ka udu network bu ihe ozo, nyefe mgbasa ozi ezubere iche nke ha chere na ha ga - akasiri gi nma. Amụma nzuzo a na-ekpuchi ojiji nke NYECOUNTDOWN, LLC, ọ naghị ekpuchi mkpuchi nke ndị mgbasa ozi ọ bụla.
N'oge ụfọdụ, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike zitere gị akwụkwọ akụkọ electronic, ọkwa, ederede (sms) nyocha ma ọ bụ ozi ndị ọzọ, ma ọ bụ na-agwa gị okwu site na usoro akpaka. Ọ bụrụ na ịchọghị ịnata nkwukọrịta ndị a ma ọ bụ nke a, ị nwere ike ịpụ site na isoro ntuziaka ndị enyere na akwụkwọ akụkọ elektrọnik na ọkwa, ma ọ bụ ozi ịntanetị. [Email na-echebe] egosiputa ochicho gi ka ewepu ya na ndepụta obula ma obu wepu data gi na NYECOUNTDOWN, LLC. Ederede (sms) pụọ na wezuga, naanị zaghachị na “Zọpụta”.
Agbanyeghị na ọtụtụ mgbanwe nwere ike ịbụ obere, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike ịgbanwe Iwu Nzuzo ya site n'oge ruo n'oge, na NYECOUNTDOWN, naanị ikike LLC. NYECOUNTDOWN, LLC na-agba ndị ọbịa ume ịlele ibe a ugboro ugboro maka mgbanwe ọ bụla na Iwu Nzuzo ya. Gị iji saịtị a na-aga n'ihu mgbe mgbanwe ọ bụla na Iwu Nzuzo a ga-eme ka ịnabata mgbanwe a.
Mkpesa na mmachi nke Ibu ọrụ
Iwu amụma nzuzo a ga-achịkwa otu onye nwere onwe ya na ikike ya imebi ihe dị ka enwere na NYECOUNTDOWN, Iwu Okwu LLC dị ka iwu si dị.
Iwu nchịkwa na Nanị
A ga-achịkwa iwu nzuzo a site na otu Iwu Na-achịkwa na Nweta Nkọwapụrụ Dị ka ọ dị na NYECOUNTDOWN, Usoro Ojiji LLC dị ka iwu ndị ahụ dabere na ebumnuche dịka iwu nyere.
Onye anyi bu - https://nyecountdown.com